ဆရာဝန်တွေ, ဆေးခန်း, အာမခံ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ဆရာဝန်များ, ဆေးခန်း, အာမခံ
နာကျင်မှု smear အမျိုးသားများအတွက်ကင်ပိန်းပြီးနောက်ဆီးအခါသင်နေတုန်းပဲအဆုံး tripperok အပေါ်စှဲပါပဲ။ ကုသရပါမည်။ ထိုအခါရှိရာသို့အလျင်အမြန်, ပိုကောင်း။ ketorol သည်အထိ Anesthetize ။ ဒါဟာကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးခဲ့ ...
Doppler echocardiography နှင့်နှလုံးခြားနားချက်ကဘာလဲ?
Doppler echocardiography နှင့်နှလုံးခြားနားချက်ကဘာလဲ? Doppler နှောက်သင်္ဘောသွေးကြောများ၏ရောဂါများအတွက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာခဏအသုံးပြုသည်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, မူးဝြေခင်း, နေခြင်းဖြင့်သတိလစ်၏အကြောင်းတရားများဆုံးဖြတ်ရန် ... ။
နာတာရှည်ရောဂါကြောင့်ရှောင်ရှားဖြစ်နိုင်လျှင်ကဘာလဲ? သူတို့ထံမှအဘယ်သူမျှမနာတာရှည်ရောဂါသို့မဟုတ်သေခြင်းတရားဒါဟာမည်သူမဆိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ ... ရှောင်ကြဉ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝအသက်အဘို့တကိုယ်တည်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
အဆိုပါ microflora ရှာတွေ့ခဲ့သည်: လိင်အင်္ဂါရလဒ်သည်မျိုးစေ့ကြဲသည့် microflora ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မိန်းကလေးငယ်များ, ။ ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။
အဆိုပါ microflora ရှာတွေ့ခဲ့သည်: လိင်အင်္ဂါရလဒ်သည်မျိုးစေ့ကြဲသည့် microflora ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မိန်းကလေးငယ်များ, ။ ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။ ကောင်းသောဘာမျှမ။ dysbiosis ။ သစ်ပင်ပန်းမန်ဖြစ်သင့်သည်။ နှင့်သွေးဆဲလ်တွေကိုအဖြူအဖြစ်ကောင်းစွာ။ microflora ၏မရှိခြင်းမကောင်းတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကသန့်ရှင်းရာဌာနကိုမသင့် ...
ဘယ်လိုသွားပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြောပြ ကျေးဇူးပြု. ?? ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာပါဘူးအဘယ်အရာနှင့်? ဒါဟာသင်နာကျင်?
ဘယ်လိုသွားပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြောပြ ကျေးဇူးပြု. ?? ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာပါဘူးအဘယ်အရာနှင့်? ဒါဟာသင်နာကျင်? မကြောက်။ အားလုံးချောကလက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ jackhammer)))) ဒါကြောင့်လေဆာရောင်ခြည် သာ. ကောင်း၏။ သူတို့ကစိတ်ထိခိုက်ကြဘူး ... ဒါဟာရန်လိုအပ်ပါသည်
မီးယပ်ပေါ်မေးခှနျးက။ အဆိုပါ Corpus luteum ကဘာလဲ?
မီးယပ်ပေါ်မေးခှနျးက။ အဆိုပါ Corpus luteum ကဘာလဲ? သင်ဒီမှာကအကြောင်းဖတ်နိုင်! နေရောင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်အဘယ်မှာရှိ zhltoe ခန္ဓာကိုယ်! ပြည်တွင်းရေးဟာ Ovary (LAT ။ Corpus luteum) ယာယီသံ Zhltoe ခန္ဓာကိုယ် Zhltoe ခန္ဓာကိုယ် ...
မော်စကိုတွင်မှဲ့များကိုဖယ်ရှားရန်အဘယ်မှာရှိသနည်း အမည်, လိပ်စာ, ရှိပါက - အဆက်အသွယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မော်စကိုတွင်မှဲ့များကိုဖယ်ရှားရန်အဘယ်မှာရှိသနည်း အမည်, လိပ်စာ, ရှိပါက - အဆက်အသွယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် nevi (moles) ကိုမဖယ်ရှားမီဆရာဝန်နှင့်အမြဲတိုင်ပင်သင့်သည်။ ဒါကအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ပါ။ အရေပြား venereologic ဆေးခန်း 1 အတွက်လက်ခံသည်, ...
ဘယ်မှာ Krasnoyarsk အတွက် sanminimum သွားကြဖို့ငါ့ကိုပြောပါ?
ဘယ်မှာ Krasnoyarsk အတွက် sanminimum သွားကြဖို့ငါ့ကိုပြောပါ? သူတို့အဲဒီမှာမဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါ (FSEB) Krasnoyarsk နယ်မြေတွေကိုစောင့်ကြည့်, sanminimum Krasnoyarsk, semaphore, ဃ။ 413 လျ။ : +7(391) 201-58-59 (သန့်ရှင်းအနည်းဆုံး) ...
H ကို: P ES naznachel နှလုံးအထူးကုယေဘုယျနှိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်သလော : - ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့စစ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်
H ကို: P ES naznachel နှလုံးအထူးကုယေဘုယျနှိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်သလော : - ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့စစ်တမ်းအဖြေရှာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များလည်း Non-ထိုးဖောက် electrophysiological အဖြစ်လူသိများ (TEES) pacing transesophageal ၏နည်းလမ်းအဘို့ကောက်ယူနေသည် ...
ငါဆေးခန်းများတွင်နေမကောင်းရနိုင်နေထိုင်ရာအရပ်တွင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော ဟုတ်ကဲ့တစ်ဦးအာမခံလက်မှတ်၏ရှေ့မှောက်တွင်၌၎င်း, ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုထားပါသည် poliklinnika တစ်အရေအတွက် (ကသူတို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဟုပြော) ကိုရယူလိုက်ပါ ...
endoscopic ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ laparoscopic ခွဲစိတ်ခြင်းမှမတူကဘာလဲ။ အဆိုပါ ureter အတွက်ကျောက်။
endoscopic ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ laparoscopic ခွဲစိတ်ခြင်းမှမတူကဘာလဲ။ အဆိုပါ ureter အတွက်ကျောက်။ Endoskopicheskaya- လုံးဝဖြတ်တောက်ကျောက်ကိုရဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစား urethroscope ပါလိမ့်မယ် ... ပြီးသားက Laparoskopicheskaya- ...
ဓာတုတံဆိပျ, အလင်းအဆာကဘာလဲ? ဓာတုဟာပါးစပ်လိုင်အချို့အကြိမ်ဓာတုအားဖြင့်ခိုင်မာစေသောရုံ irradiation geliolampoy ဓာတုတံဆိပျပစ္စည်းငါးပိပြီးနောက်အလင်းငါးပိ + နေသည် opredelnie အဘို့ကိုယ်နှိုက်ကခိုင်မာစေသော ...
သငျသညျကျော၏ကုသမှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း VI ကို Dikul (Dikulja ဆေးခန်း) ၏ဦးတည်ချက်အောက်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာကိုဆတ်ကျွန်းမှလျှောက်ထားရန်ပါလိမ့်မယ်, မော်စကိုပြန်၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးရုံအကြံပေးများနှင့် ...
Посоветуйте пожалуйста хорошую стоматологическую клинику в Москве. Есть такая. Называется "Тридент Юг". Находится на территории жилого комплекса "Синяя птица" (это Северное Бутово), на улице Старокачаловской, 6. Добраться туда можно от…
အဘယ်အရာကိုနာကျင်ကိုက်ခဲအဆစ်ဆိုရငျကော ကကုသရန်ဆရာဝန်များရဲ့အစမှာစစ်တမ်းကောက်ယူခံရဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်များလွန်း, ဒူလာကအရမ်းကွဲပြားခြားနားသော-ထံမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ synovitis နှင့် bursitis နှင့်အတူအဆစ်နှင့်အဆစ်များ overtaxing မှဖြစ်နိုင်ပါသည် ...
တစ်ဦးသွားပေါ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုထားရန်ဖြစ်ပျက်သနည်း ငါအခါသွား၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုချွတ်ချိုးပဉ္စမသွားပါ (အပြုံးထဲမှာမြင်သာ) တွင်ထားရှိ cermets ။ သူတို့ကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်, ကြာရှည်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ယောက်ျားတွေ, ငါ့ကိုပြောပြပါ, အဘယ်သို့ငါဘယ်ကနေပထမဦးဆုံး-အကူအညီဆီမှေး solkoseril တွေ့ရှိခဲ့?
Ребятки, подскажите, нашла в аптечке мазь солкосерил-от чего или для чего? Солкосерил от мокнущих ран и ожогов. Отличная вещь. Недаром этот гель называют "вторая кожа" Солкосерил — мазьстимулятор регенерации тканей.Мазь…
ခင်ပွန်းတစ်လအကြာနိမ့်ဖတ်တို့ကြီးထွားသို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါ, အသည်းခြောက်၏ကနဦးအဆင့်တွင်, ALT 192, 214 AST ရှိသနည်း
ခင်ပွန်းတစ်လအကြာနိမ့်ဖတ်တို့ကြီးထွားသို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါ, အသည်းခြောက်၏ကနဦးအဆင့်တွင်, ALT 192, 214 AST ရှိသနည်း အသည်းအသည်းခြောက်၏ဘဝအသက်တာဟောကိန်းကဘယ်လိုဖြစ်သနည်း အသည်းခြောက်၏အများအားဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် ...
အဘယ်အရာကို diuresis? ဆီးတစ်ခုအံ့သြစရာအရေအတွက်ကကျန်းမာသူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလူနာအတွက်ခွဲဝေသင့်သနည်း
အဘယ်အရာကို diuresis? ဆီးတစ်ခုအံ့သြစရာအရေအတွက်ကကျန်းမာသူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလူနာအတွက်ခွဲဝေသင့်သနည်း နေ့စဉ် diuresis (ဆီး Dedicated) အများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်: လိင်, အသက်, အရေအတွက် ...
မော်စကို prompt ကောင်းသောဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစင်တာကို !! ATP ကြိုတင်မဲ
မော်စကို prompt ကောင်းသောဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစင်တာကို !! ATP ကြိုတင် http://www.uro.ru/ Urology ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများ၏ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် Institution မှ Research Institute မှတစ်ဦးဦးဆောင်ရုရှားသိပ္ပံနှင့်စမ်းသပ်ဆဲ, အတိုင်းအတာများနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးကုသမှုစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Urology ၏ Research Institute မှ high-tech သည် ...
49 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,275 စက္ကန့်ကျော် Generate ။